नेपालमा प्रधानमन्त्री केपि ओली कै संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको हो ! – yuwa Awaj
कार्तिक १९, २०७७ बुधबार 3
काठमाडौ : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संरक्षणमा नेपालमा भ्र’ष्टाचार मौलाएको औंल्याएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले न्यूज एजेन्सी नेपाललाई दिएको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संरक्षणमा ठूला भ्रष्टा’चार काण्ठहरु घटेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय अ’ख्तियार दुरुपयो’ग अनु’सन्धान आयोग खुद्रे मुद्दाहरु बोकेर भ्रष्टा’चार नियन्त्रणको डङ्का पिट्ने गरेको बताएका छन् ।अख्ति’यारले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको फाइल तामेलीमा राखेपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ग’म्भीर ध्यानाकर्षण भएको
भन्दै रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको ओठे प्रतिबद्धता र व्यवहारका कारण भ्रष्टा’चारीहरु संरक्षित भएको बताएका छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीद प्रकरण, ओम्नी प्र’करणमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले उनको संरक्षणमा भ्रष्टा’चार मौलाएको पु’ष्टि हुने उनको तर्क छ । रेग्मीले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचा’रको मुल भनेको राजनीतिक नेतृ’त्व तह हो ।
तलका खुद्रा, मसिनालाई रोकेर भ्र’ष्टाचार निय’न्त्रण हुने होइन । यो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले बेला बखत म भ्र्रष्टाचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि गर्न दिन्न । शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भन्नुभयो तर व्यवहार मा त्यो उतार्न सक्नुभएन । उहाँको भ्रष्टाचारविरु’द्धको बोली ओठे प्रतिबद्धता मात्रै देखियो, कार्यान्वयनमा देखिएन । त्यसो होइन भने बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफ्नो महासचिवलाई कुनै गल्ती गरेको छैन भनेर जोगाउनुभयो ।’
शिक्षालाई श्रम र सीपसंग जोड्न शिक्षामन्त्रीको आग्रह!
काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विज्ञान र प्रविधिको उपयोग गर्दै शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको ‘मधेसका शिक्षाका सवालहरु’ विषय संवादमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षालाई
श्रम, सीप उत्पादन हुँदै समृद्धिसँग जोड्न सकिएमा मात्र गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभएको हो । उहाँले यसका लागि शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले शिक्षकलाई राजनीतिक दलगत सङ्गठनको सक्रियता नभइ कक्षाकोठाको सक्रियतामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
Prevकसले रोक्दो रहेछ, गरिबलाई खान दिन हेरौँ भन्दै साझा पार्टीले यस्तो विज्ञप्ति निकालेर गर्यो नेकपालाई खुल्ला चुनौती…हेर्नुहोस ।
Nextप्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ : राजीनामा दिनेबाला छैन म, देशलाई बर्बादीतिर जान दिन्न…हेर्नुहोस् ।
चीनमा १० लाख मान्छेले लगाए कोरोना खोप…हेर्नुहोस् ।
लगातार दोस्रो खेलमा जित निकाल्दै इटाली पुग्यो अन्तिम १६ मा
अर्थमन्त्री पाैडेल भन्नुहुन्छ : को’भिड विरु’द्धको खोप सबै नेपालीलाई निःशुल्क हुन्छ…हेर्नुहोस् ।